RIP Upstart. Caadi Fadlan (Mark Mark Shuttleworth) | Laga soo bilaabo Linux
RIP Upstart. Caadi Fadlan (Mark Mark Shuttleworth)
Tani waxay ahayd waxa uu hadda qoray Calaamadee Shuttlewotrh boggiisa:
Iyada oo codbixintii codbixiyaha Bdale Garbee toddobaadkan, guddiga farsamada ee Debian ayaa ugu dambayntii xalliyay arrinta bilowga ah ee Debian iyo Ubuntu, iyaga oo doorbidaya nidaam.
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo guddiga dooddiisa fekerka leh ee cadaadiska saaran haanta kalluunka; u samee baal sare falanqaynta iyo go'aan qaadashada ku saleysan khibrada maadaama xubnaha guddiga badankood ay si cad waqti ugu qaateen inay isbartaan labada ikhtiyaar. Waan ogahay in dadka ka shaqeeya Upstart ay qaddariyeen ammaanta tayada koodhkeeda, tijaabinta adag, iyo caddaynta ujeeddada ay muujiyeen xitaa xubnihii ka soo horjeeday; Aniga aragtidayda, waxay ii ahayd farxad inaan taageero dadaallada dadka doonaya inay abuuraan barnaamijyo bilaash ah oo bilaash ah, iyo inay si sax ah u sameeyaan. Upstart wuxuu sifiican ugu adeegay Ubuntu - waxay na siisay faaiido weyn oo tartan ah markii ay arrimihu aad u firfircoonaayeen, waxay ahayd mid aad u xasilan (ka dib oo dhan waa aasaaska loo adeegsaday labadaba Ubuntu iyo RHEL 6 waxayna dejisay heer sare tayada software-ka Canonical ee aan ku faano.
Si kastaba ha ahaatee, waxay go'aansadeen nidaam, iyo maadaama Ubuntu uu xubin ka yahay qoyska Debian, waa go'aan aan taageersanahay. Waxaan weydiin doonaa xubnaha bulshada Ubuntu inay caawiyaan si loo fuliyo go’aankan si hufan, nidaam u keenaya labada Debian iyo Ubuntu si badbaado leh oo dhakhso leh. Xaqiiqdii waxay qaadan doontaa waqti si loo gaaro xasilloonida iyo daboolida aan maanta ku raaxeysaneyno iyo 14.04 LTS oo leh Upstart, laakiin waxaan weydiin doonaa guddiga teknolojiyadda Ubuntu (qaar badan oo naga mid ah xubnahayagu kama shaqeyno Canonical) inay dib u eegaan booska iyo samee qorshooyin kala guur oo ku habboon. Waxaan hubaa inaan dhameystiri doonno shaqada si aan uga dhigno logind cusub inuu shaqeeyo iyadoo aan loohelin nidaamka pid 1. Waxaan rajeynayaa inay rabaan inay nidaam u keenaan Ubuntu oo ah ikhtiyaar soosaare sida ugu dhakhsaha badan ee si kalsooni leh looga heli karo Debian, iyo sida ugu macquulsan ee aan u shaqeyno tayada adeegga lagu kalsoonaan karo oo u dhiganta dhismaha hadda jira.
Teknoolojiyada xulashadu way isbeddelaysaa, barnaamijkeenuna wuxuu u beddelaa labadaba hoggaaminta (maanta diiradeenu waa daruur iyo mobiil, waxaanan si cad u hoggaamineynaa GNU / Linux labada dhinacba) iyo in aan la qabsanno isbeddelada lagu soo rogay meelo kale. Qeexiddu waa mid muran badan sababta oo ah waxaa looga baahan yahay labada horumariya iyo sysadmins si ay u fahmaan quirks iyo awooddeeda. Layaab malahan inuu ahaa dood adag, cawaaqibka ka dhalan kara boqolaal kun oo dad ah aad ayey u sarreeyaan. Aragtidayda, xaqiiqda ah in dadka wanaagsan ay kala qaybsameen waxay soo jeedinaysaa in labada ikhtiyaar midkood uu si fiican u shaqeyn doono. Waxaan ku kalsoonahay in khamriyeyaasha cusub ee PID 1 ay mas'uuliyaddaas u qaadi doonaan si dhab ah sida kooxda Upstart ay sameeyeen, ayna ku raaxaystaan ​​inay la shaqeeyaan. Iyo ... horay.
Gabayga Lennart wuxuu qoray:
Waxay ahayd go'aan aad u adag Ubuntu! Waan hubaa inaysan u fududaan iyaga. Waxaan u maleynayaa inay tahay go’aanka saxda ah, dabcan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhoweeyo Ubuntu bulshada nidaamsan! Waxaan rajeynayaa wada shaqeyn mira dhal ah! Waxaan rajeyneynaa inaan awoodno ka tag wixii hore, iyo wada shaqeynta mustaqbalka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » RIP Upstart. Caadi Fadlan (Mark Mark Shuttleworth)
Waa war xun Canonical oo ku faanay Upstart-kooda, laakiin war wanaagsan oo u ah dhammaan GNU / Linux distros systemd hadda wuxuu leeyahay lammaane awood badan, in kasta oo ka dambeeya Canonical waxaan u maleynayaa inay adeegsatay systemd (cusbooneysiinta waxaan ku ogaaday in had iyo jeer xirmo la yiraahdo libsystemd) hada isbadalku wuxuu noqon doonaa mid guud waxtarna u leh dhamaan ...
Jawaab José Jácome
duunyo 97 dijo
mise waxaa laga yaabaa inaysan ahayn ??
Ku jawaab kAoi97
Waxaan u maleynayaa inay tahay tan ugu macquulsan uguna qosolka badan ee Mark uu sheegay muddooyinkii u dambeeyay .. Hambalyo!
Go'aan weyn oo heer diblomaasiyadeed, siyaasadeed iyo xiriir bulsho, in Ubuntu aqbali doonto waxa hooyada distro (Debian) ay u disho, taas oo ah, ansaxinta Nidaamka 'Updart'
Waqtigaan Ubuntu (Mark Shuttleworth) waa inuu ka fekeraa go'aan farsamo, isdhexgalka walxaha Upstart ee Systemd, hagaajinta iyo horumarka kan labaad.
Jawaab Gibran Barrera
Aynu aragno haddii tani ay bilaabeyso inay xoogaa aasto astaamaha (qabow) inta udhaxeysa RH iyo Canonical oo aan u adeegno sidii loo abuuri lahaa nidaam deegaan Linux oo wanaagsan oo loogu talagalay qof walba.
Waxyaabaha ku saabsan MIR, fadlan, ha u oggolaadaan Canonical inay sidoo kale ku darsadaan mashaariicdooda oo ay arkaan haddii ay faa'iido u leeyihiin iyaga iyo qof walba, illaa iyo inta lagu daabacayo shatiyada bilaashka ah, sida xaaladdu tahay.
Aad diblomaasiyadeed oo sax ah Mark, iyo sidoo kale mid aad u saxan oo si fiican loogu soo qaaday jawaabta Gabayga, waxay umuuqataa guuldaro Canonical, laakiin waxaan qabaa inay tahay in loo arko talaabada ugu horeysa ee loo maro is afgarad-guul
Waxaan la yaabanahay waxa hadda ku dhici doona ChromeOS oo adeegsanaya bilowga.
Maqaalka, ma aqaano inay fiicnaan doonto iyo inay xun tahay, laakiin tani waxay nolosha u fududeyneysaa horumariyayaasha.
Canonical wuxuu badbaadin doonaa hanti ku saabsan dayactirka oo wuxuu uga tagayaa shaqada oo dhan debian XD
Debian wali amarro toos ah ayey siineysaa ubuntu !! ... Ilaa iyo inta ay ku sii soconayaan wax soo saar fudud, waxyaabaha sidan oo kale ah way sii socon doonaan !! ..
Ku jawaab freebsddick
Laakiin waxay lacag badan ku keydin doonaan horumarka.
Hadda waxaan ubaahanahay * inaan joojiyo waallida MIR oo ujeedo Wayland
I rumee, qashinkaas waligiis ma arki doono iftiinka maalinta. Waylan ugu fiican ayaa fursad leh !! Mir shaki la’aan wuxuu la mid yahay xaashidaas la isticmaalay ee aad sankaaga ka soo saarto markuu buunshadu ka buuxdo!
Waxay ahayd go’aan sax ah, dhaqaale ahaan iyo dublamaasiyad ahaanba. Maaddaama Mark uu leeyahay "dadaalladeennu waa kuwo guurguura oo daruur xuddun u ah", ma awoodi kartid inaad lumiso kheyraadka adoo sii wadi doona Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay ku soo food leeyihiin horumarinta Mir, halka beddelka kale ee nidaamyada hawlgalka moobiilka ay durba u leeyihiin joogitaan dhab ah suuqa (Waxaan si gaar ah uga fikirayaa Sailfish iyo Firefox OS) ama waxay ku dhow yihiin in la furo (Tizen) . Dib u dhac badan ayaa ka dhigan in soosaarayaasha iyo dadka raadinaya waxyaabo kale ay doortaan kuwa suuqa yaal. Waan ogahay inay jiraan wax badan oo filasho ah taabashada Ubuntu, laakiin rajadu weligeed sii waari mayso. Wax ku ool ah xoojinta mid ka mid ah nidaamyadan waxay la macno tahay Ubuntu inuu leeyahay waqti ka adag sida ay noqon karto maanta. Waqtigu waa cadawga ugu xun ee Mark waana ogyahay. Waxaa laga yaabaa inaan ku dhameysto bixinta Mir, haddii horumarku waqti dheer qaato. Iyo in hadii ay noqon laheyd mid fudud dhamaan qaanuunka, maxaa yeelay Sailfish wuxuu adeegsadaa Wayland waana mid shaqeyneysa, taasi waa, waxay waayi doontaa horumar iyo waqti uu suuqa ku joogo, waana xaalad muhiim u ah guushiisa.
Dhowr bilood ka hor waxaan uga soo haajiray 'gentoo' kana soo dallacay systemr !! Ma aysan soo bandhigin wax dhibaato ah inkasta oo aysan ahayn inaan horumar weyn gaadhay .. Nidaam ahaan waxaan u arkaa inay wali jiraan waxyaabo badan oo lagu xallin karo arjiga, qiimaha tahriibka (xaga horumarka) iyo faa'iidooyinka dhabta ah ee ay leedahay wuxuu keensadaa isbarbardhiga kuwa kale ee qoraallada qormooyinka iyada oo aan loo hurin xasilloonida dabcan
Xiiso leh, waxaan kor u qaaday socdaalka, laakiin inbadan oo isku mid ahaanta jawiyada marka loo eego xukunka horumar weyn. Aragtidaada, ma mudan tahay in lagu dadaalo?
Ku jawaab kavra
Sida loo qoro microcontrollers PIC-ka Linux (pk2cmd)
U dir LINE Martiqaad asxaabtaada